चौतर्फिक आलोचना पछि आईजीपी खनालले सबैलाइ दिए यस्तो चेतावनी – PathivaraOnline
Home > समाचार > चौतर्फिक आलोचना पछि आईजीपी खनालले सबैलाइ दिए यस्तो चेतावनी
चौतर्फिक आलोचना पछि आईजीपी खनालले सबैलाइ दिए यस्तो चेतावनी
काठमाडौं,सर्वेन्द्र खनाल प्रहरी महानिरीक्षक भएको ६ महिना भएको छ । यो अवधिमा उनले सांगठनिक सुधार तथा शान्ति–सुरक्षाका पक्षमा केही महत्वपूर्ण कदम चालेका छन् । प्रहरीभित्र लामो समयदेखि रोकिएका बढुवाहरू अघि बढाएका खनालले केन्द्रमा ह्युमन ट्राफिकिङ कन्ट्रोल ब्युरो तथा साइबर कन्ट्रोल ब्युरो स्थापना गरेका छन् । यसबीच विध्वंसात्मक कार्यमा संलग्न एवं विखण्डनकारी गतिविधिमा संलग्नमाथि पनि प्रहरीले तीब्रताका साथ कारबाही चलाइरहेको छ । यद्यपि केही समययता समाजमा घटेका सामाजिक अपराधका कतिपय घटनामा प्रहरी संलग्नता र छानबिनलाई लिएर चर्को आलोचनासमेत हुँदै आएको छ । देशमा बढ्दो बलात्कार, प्रहरीमाथि उठेका प्रश्न, अनुसन्धान आदि विषयमा केन्द्रित रहेर साप्ताहिकका लागि जनक तिमिल्सिना र भिषा काफ्लेले खनालसँग गरेको कुराकानी :
कञ्चनपुरलगायतका केही घटनामा प्रहरीमाथि नै औंला उठाइएको छ नि ?
तथ्यांकअनुसार जम्मा २६ प्रतिशत घटना नचिनिएका अथवा पेसेबर अपराधीबाट भएको छ । बाँकी चिनजानका, साथीभाइ, नातागोताका मानिसहरूबाट सामाजिक अपराध भएको छ । घर, कोठा, स्कुल, साथीकहाँ जाँदा, अभिभावकत्वका क्रममा यस्ता घटनाहरू भएका छन् । जसले अभिभावकत्व ग्रहण गरेको छ उसैबाट बलात्कृत हुनुपर्छ भने त्यहाँ प्रहरीको उपस्थिति भएन भन्नु कति न्यायसंगत हुन्छ ? २६ प्रतिशत नचिनेका र पेसेबर अपराधीहरूले घटाएका घटनाका सन्दर्भमा प्रहरी गस्ती, सुराकी, प्रहरीले सूचना संकलन, जासुसी संयन्त्र प्रयोग आदि गर्ने काम होला, समुदायसँग सहकार्य गर्ने विषयहरू होलान्, जसले घरमा सुरक्षित छु भन्छ त्यही असुरक्षित हुन्छ भने प्रहरी कसरी घरघरमा पुग्न सक्छ ?
यसमा पनि कहाँ, के कति भन्ने कुरा हेर्नु जरुरी छ । प्रहरीले नचाहिने नै गरिरहेको छ, कमजोरी नै गरिरहेको छ भने भन्नु पनि पर्छ, तर प्रहरीले अपराधीहरूलाई रातारात, दौडँदा–दौडँदै पनि पक्राउ गरेको छ नि । एक घण्टाभित्र, दुई घण्टाभित्र अपराधीलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ । पोखरामा घटना घटाएर भाग्ने क्रममै आबुखैरेनीबाट पक्राउ गरेको छ । यसरी प्रहरीले रेस्पोन्स गरेका घटना उत्तिकै छन् । प्रहरी नै यस्तो–उस्तो भनेर मनोबल गिराउने खालको धारणाले हामी कसैलाई ठीक गर्छ जस्तो लाग्दैन ।
प्रहरीको कमजोरीका विषयमा प्रतिवेदन पनि आइसकेको छ । प्रहरी १२ बजे नै जानुपथ्र्यो, त्यो कुरा भएन । अनुसन्धान गर्ने सन्दर्भमा केही प्रमाण संकलन गर्नुपथ्र्यो त्यो कुरा व्यवसायिकता अनुरूप हुन सकेन । यस्ता कुरा नहुनुका पछाडि धेरै ठूलो आशंका पनि छ । ती आशंका मेटाउनुपर्नेछ । गल्ती गरेकोमा, लापरवाही गरेकोमा हामीले निलम्बन गरेर कारबाही अघि बढाएका छौं, उनीहरूमाथि पनि अनुसन्धान भैरहेको छ । कसुरअनुसार विभागीय वा ठूलो कारबाही हुन सक्छ, जे पनि हुन सक्छ । सत्तारूढ दलकै प्रमुखमध्येका एक नेताले संसदमै शान्ति सुरक्षा र बढ्दा सामाजिक घटनाको विषयलाई लिएर सरकार एवं गृह प्रशासनको आलोचना गर्नुभयो । सुरक्षा संयन्त्र कमजोर भएको भन्नुभयो, उहाँले कुरै नबुझी बोल्नुभएको हो ?
कसले के बुझ्यो म त्यता जान्नँ । मैले बुझेको कुरा र मिनी संसद् मानिने दुईवटा संसदीय समितिमा प्रहरीले गरेका कामको प्रशंसा नै भएको छ । त्यहाँ माननीय सांसदज्यूहरूले प्रहरीले गरिरहेको छ भन्नुभएको छ, त्यो कुरा पनि आइदिए हुन्थ्यो । बहुमत सांसदले प्रहरीको प्रशंसा गर्नुभएको छ, चिन्ता व्यक्त गर्नु जायज कुरा हो । प्रहरी संगठनको प्रमुखको हैसियतले म त अपराधको कुनै घटना नै नघटोस् भन्ने चाहन्छु, तर मैले सोच्दैमा त्यस्ता घटना नघट्न सम्भव नहोला ।
हजुरबुवाले नातिनी बलात्कार गर्ने, नातिले हजुरआमा बलात्कार गर्ने, मामा र काकाले बलात्कार गर्ने घटनाहरू घटिरहेका छन् । यस्ता घटनामा हामी सबैले सजग र सतर्क भएर अघि बढ्न जरुरी छ । संसदीय समितिमा पनि यस्ता कुराहरूमा बहस भयो । यसमा दोषारोपण गर्नुभन्दा पनि सामाजिक सुव्यवस्थाका लागि सामूहिक प्रयास गर्नुपर्छ । सचेतनाका लागि काम गर्नुपर्छ । केही अपराधमा गम्भीर सजाय हुन्छ भन्ने सन्देश पनि दिनुपर्ला, कहीँ नैतिक शिक्षा जरुरी होला । स्कुल, कलेज, घर, समाज, सबैतिर नैतिक शिक्षा जरुरी छ ।
सबैभन्दा ठूलो कुरा म काममा विश्वास गर्छु । मैले एक सुका कसैलाई दिनु पनि परेन । कसैलाई आजसम्म सरुवा–बढुवामा यस्तो गर्देऊ, उस्तो गर्देऊ पनि भनिन् । म प्रहरी महानिरीक्षक हुँदा पनि त्यसरी नै भए । म कुनै पनि हालतमा यस्ता नचाहिने गलत अभ्यास हुन दिन्नँ । तपाईहरूले विश्वास गर्दा हुन्छ, म राम्रै गर्नका लागि भएको छु । प्रहरीले आफ्नो पेसागत दक्षता तथा क्षमतालाई निखारेर लानुपर्छ । जसले यी कुरालाई लिएर काम गर्छ, उसको स्टेनेबलिटी नै त्यही हो । केही समय पावरले होला, केही समय चाकडीले होला, तर ब्यवसायिक क्षमता वृद्धि गरेन र व्यवसायिक निष्ठामा बसेन भने कोही पनि यो संगठनको नेतृत्व गर्ने अवस्थामा पुग्दैन ।
म जसरी भए, त्यसले निरन्तरता पाउनुपर्छ भन्ने मेरो स्पष्ट दृष्टिकोण छ । काम गर्नेहरूलाई यो होइन भन्न सकिन्छ, यसले काम गर्न सक्दैन भन्न सकिन्छ ? आजकल त एकदमै पारदर्शी जमाना छ । राम्रो काम कसले गरेको छ, नराम्रो काम कसले गरेको छ, सबैले देखिरहेका छन् । हामी यसमा एकदमै पारदर्शी छौं, सुशासन कायम गर्ने कुरामा दृढ छौं । प्रहरी संगठनमा नि:स्वार्थ, विवेकपूर्ण ढंगले दृढताका साथ काम जो इमान्दार छ त्यसले मात्र गर्न सक्छ ।
सरकारलाई पूर्वमन्त्रीले यस्तो चुनौती दीए पछि सबै परे दंग
दुःखद निर्मला हत्याकाे ७२ दिनः के गर्दैछन् बम दिदीबहिनी र बिष्ट? गृहमन्त्रीलार्इ यस्तो चेतावनी – भिडियो हेरेर सेयर गराैं
सा’रै दु’खद ख’बर : तिहारकै दिन नेकपा नेताको मृत्यु
भाईलाई झु’ण्डिएको फो’टो खिच्न लगाएर १४ बर्षिया बालिकाले दे’ह त्याग गरिन, (भिडियो सहित )